Momba anay - Beijing Qinghua Haichuang International Trade Co., Ltd.
Izahay dia orinasa manondrana akanjo mahery, miasa ny orinasa manondrana varotra ivelany mandritra ny taona maro, indrindra amin'ny fikarohana sy fampandrosoana, famokarana, fitantanana tanora lahy sy vavy ambony. Ny orinasanay dia ny filan'ny mpanjifa sy ny famolavolana akanjo, ny teknolojia, ny lamba mitambatra, natomboka tsy tapaka mifanaraka amin'ny toetran'ny mpanjifa manokana momba ny famolavolana akanjo, arakaraka ny tena ilain'ny vahiny hanamboarany (toy ny: fomba, teknolojia manokana, takian'ny vidiny. .. ...).
Ankehitriny, ny mpividy rehetra dia manana olana toy izany, izany hoe sarotra ny mitady mpiara-miasa maharitra sy mahasoa. Matetika, na toy inona na toy inona ny habetsany, ny mpividy rehetra te hiasa mivantana amin'ny mpanamboatra, mba hampihenany ny vidin'ny fividianana. Fa ny fifaninanana eo amin'ny tsena ankehitriny dia tsy ny vidiny ihany. Ny mpividy tsirairay dia miezaka ny maneho vokatra miavaka izay mety amin'ny mpividy. Saingy ny foibe fanodinana nentim-paharazana dia tsy afaka manome serivisy toy izany. Manoloana izany, ny orinasanay ankehitriny dia napetraka amin'ny famokarana sy ny fikarohana ary ny fampandrosoana amin'ny iray amin'ireo maodelin'ny orinasa, afaka manome anao ireto serivisy manaraka ireto:
1. Omeo ny vokatra azo amin'ny marika avy aminay.
2.Manitsy ary mamokatra ny vokatray manokana arak'izay takian'ny mpividy.
3.Mampivoara ary mamokatra vokatra vaovao mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpividy
Nandritra ny taona maro, ny orinasanay dia nanome palitao palitao lehilahy sy vehivavy efa ho 1 tapitrisa, palitao landihazo, palitao lava, palitao tokana ary fomba hafa ho an'ny orinasa malaza any Russia, Turkey, Ukraine, sns. daty fanaterana ara-potoana sy serivisy fandinihana amin'ny ho avy, ny orinasa dia nahazo ny fiderana sy fahatokisan'ny mpanjifa.
Ny orinasanay dia miorina ao anqing tanàna anhui faritany, dia iray amin'ireo ivon-damba any Shina. Ny efitrano fampiroboroboana ny vokatra sy ny fampirantiana dia ao Beijing. Ho fanampin'izany, ny orinasanay dia manana solontena Rosiana maharitra any Moskoa, afaka miresaka momba ny fiaraha-miasa sy ny antsipirian'ny vokatra izahay amin'ny fotoana mety aminao.
Manohy manitatra ny ambaratongam-pamokarana sy ny asa amin'ny fotoana iray izahay, fa kosa manohy manatsara ny fahombiazan'ny famokarana, manohana tanteraka ny fitomboana sy ny fivoaran'ny mpiasa. Ny orinasa dia manana vondrona mpamorona akanjo miavaka, ekipa fitantanana matihanina maromaro, vondrona mpiasa miasa fitiliana henjana, dia hanohana hatrany ny filozofia momba ny matihanina, mifantoka, mifantoka, miantehitra amin'ny ekipa mpitantana tena tsara, toe-tsaina miavaka ny orinasa, manome mpanjifa vokatra tsara sy serivisy tsara.